Fanokafana akanjo vita amin'ny akanjo mitokana | Mpanamboatra sy mpamatsy akanjo mitokana ambongadiny
Fivarotana mafana bule tantera-drano azo ampiasaina amin'ny akanjo lava mitokana PP + PE
manga Mpanome akanjo fitokana-monina avo lenta mpamatsy
Ity vokatra ity dia akanjo fitokana-monina manga azo ampiasaina miaraka amin'ny lanjan'ny 50gsm. Ny fitaovana dia Polyester. Izy io dia mahazaka fanoherana tsara. Ny vokatra dia manana cuffs elastika ary famolavolana fanitsiana andilany, izay azo ovaina tsara amin'ny olona tsy mitovy endrika amin'ny vatana.
Safidy mpanamboatra akanjo fitokana-monina safidy tsara indrindra
Ny vokatray dia noforonina mifanaraka amin'ny tontolon'ny fampiharana. Ny cuffs an'ny vokatra dia noforonina elastika mba hahatonga azy ireo ho azo antoka sy ho voaro kokoa, ny fehikibo elastika dia mahatonga antsika ho mora volavolaina sy mety kokoa amin'ny asa.